Demokrasia? | mandimby maharo
Demokrasia?	Posted on 23 April 2012 by Mandimby Maharo	Hivory eny amin’ny “Kianjan’ny demokrasia” eny Ambohijatovo ny ankolafy Ravalomanana ny Sabotsy 28 Aprily 2012 izao. Hanao tatitra ny asa vita sy ireo dingana vitany nandritra izay fotoana niasany tao izay izy ireo . Io no fanambarana lehibe nataon’ireo olom-boatendry ao amin’ny parlemantan’ny tetezamita avy amin’ity ankolafy ity tao amin’ny Magro Behoririka ny zoma 20 Aprily 2012 teo.
Dia manontany ny mpanara-baovao hoe inona izany no ho taterin’izy ireo: ny nahalany ny lalana momba ny famotsoran-keloka izay tsy nandraisany anjara sy efa nomeny tsiny ve sa ny lalana momba ny fitondran-tenan’ny mpanao politika izay tsy ampihariny? Satria efa fantatry ny olona, sady tsy anisan’ny anton’ny nidiran’izy ireo tao amin’io fitondrana iarahana io rahateo izany. Ny fanontaniana ho apetraka aminy dia hoe:
– Aiza ho aiza ny fampiharana ny tondro zotra? Ny maha maika ny rehetra mantsy dia ny hialana amin’izao krizy izao fa tsy izay ady varotra sy haitraitran’izy samy mpanao politika
– Ahoana ny fandraisana andraikitr’izy ireo manoloana ireny fandrobana ny harem-pirenena maro ireny nefa izy ireo anisan’ny mpitondra ary tena mirehareha amin’izany? Sa ve tena tsy afaka niteny tokoa izy ireo ka nanaraka ambokony? fantatra fa anisan’ny andraikitr’izany parlemantera izany ny manaramaso ary manery ny governemanta mba hitantana amin’ny hintsiny ny firenena. Ny hita nefa dia toa maromaro ihany izay fanampaha-kevitra notanterahina tsy nandalo teo aminy izay, singanina manokana amin’izany ilay fiaramanidina tsy afa nisidina nampidirana trosa ny firenena mandritry ny 6 taona.
Raha tsy hionona afatsy amin’ireo roa ireo dia toa mampisalasala ihany ny hafahan’izy ireo hanome valiny mahafapo ny rehetra. Satria iaraha mahita fa izy ireo dia efa lasa nahazo ilay fomba mitranga mihe,otra … toa lelonjaza koa.
Ny zava-misy koa dia, tsy hay na fifanandrifin-javatra na niniana natao, msisy ilay fifanandrinan’ny ministeran’ny fifandraisana sy ireo mpitantana ny Radio Free FM maha be resaka tato ato. Ireto farany moa dia nilaza mazava fa hiakatra io kianja io raha tsy tanteraka ny fikasan’izy ireo ny hanitatra ny onja-peony. Raha nanotanianay ireo olona ao amin’ny mpanohitra, ireo mpanohana ny ara-dalana, dia tsy nisalasla nilaza fa tsy mampaninona azy ny hiray lalana amin’ireto mpanao gazety hitarika ny olona hitokona noho ny orinasany ireto, raha ilaina izany hanalana io fitondrana io.
Mazava izany eto ny resaka. Misy ihany ny fanararaotana ataon’ireto mpanohitra ireto amin’izay fiozongozonan’ny fitondrana izao. Tsy ny fahaizana manararaotra no ratsy satria izay ny atao hoe tetik’ady politika, fa izany dia afahana milaza avy hatrany fa malemy ireto mpanohitra ireto ka niandry izay fotoana nihetsehan’izay tsy faly avy ao aatin’ilay fitondrana vao manana fanantenana hampihatra ny demokrasia eny an-kianja, rehefa resy tosika tany an-dapa.
Ny fanontanina iray farany dia hoe maninona no eny Ambohijatovo fa tsy ao amin’ny Magro ihany no atao ny tatitra? Ekena fa manana ny tantarany io toerana io raha ny fanonganam-panjakana nataon’I Andry Rajoelina no jerena, saingy ny toerana ve no mitondra ny fandresana sa ny hevtra sy paika atao? Raha izay niezahana ho eny Ambohijatovo izay dia efa maro ihany fa ny nijanonana tao amin’ny Magro no nahitam-bokatra kokoa: nivoahan’ny tondro zotra, nizarana ny seza ao amin’ny fitondrana, niverenan’ireo sesitany sasantsasany …
Tsy midika ho fatahorana ny hiakatra ny “Kianjan’ny demokrasia akory izany fa ny fampiharana ny demokrasia tsy voafetran’ny fisian’ny kianja n any fisian’ny parlemanta n any fizarana seza fa ny fisian’ny rafitra sy teti-panorina hiasana.s